Sarin'i David Bowie misy pensilihazo miloko | Famoronana an-tserasera
"Drawing David Bowie" avy amin'i Brush Scribbles
Efa zatra mandinika isika miasa miaraka amin'ny famaranana lehibe saika tena zava-misy amin'ny endrika nomerika. Noho io antony io dia sarotra indraindray ny manavaka ny asa vita amin'ny pensilihazo miloko na menaka eo anelanelan'ny noforonina tamin'ny Photoshop izay, noho ny borosy izay maka tahaka ny firakofana sasany, dia tonga tahaka ny farany vita tanana.
Izany dia mitranga amin'ny sanganasa famoronana Brush Scribbles izay anaovany fampisehoana amin'ny azy pensilihazo miloko Inona no zava-misy azo tratrarina mba hamerenantsika an'ity mpilalao mozika sy mpanakanto mahafinaritra ity izay nandao antsika vao roa herinandro lasa izay. Saripika izay mitondra izany endrika mampiavaka ny mpihira iray izay anisan'ny hatsaram-panahy lehibe nananany dia ny fahaizana mamerina mamorona indray ny tenany.
Scribbles dia mampiseho amintsika koa ny fizotry ny famoronana ity sarin'i David Bowie avy amin'ny YouTube ity amin'izay ianao dia afaka mahita ny dingana tsirairay natao. Raha ny filazan'ilay mpanakanto tenany dia 50 ora no nanatanterahany io asa tsara kalitao io, izay tena mahagaga noho ny fampiasana pensilihazo miloko hahazoana an'io fijerin'i Bowie io.
Asa tsy mampino amin'ny loko sy ny antsipiriany hitondrana antsika ny majika hira bowie toa an'io Starman, Fame na Space Oddity io. Hira izay manako ankehitriny amin'ny fomba hafa isaky ny mihaino azy ireo isika satria matetika no mitranga izany rehefa misy mpanakanto mahay mamela antsika ary mijanona ho lova lehibe ho azy ny asany.
Burch Scribbles dia manana ny azy manokana Pejy Facebook e Instagram aiza no azonao mahita sary bebe kokoa momba azy miaraka amina predilection lehibe ho an'ity karazana asa ity ary ahitantsika famaranana ara-teknika lehibe.
Manangona an'ity entana ity ihany koa aho tadidio indray i David Bowie, mpihira iray izay mbola sarotra ny manamboatra tena dia nanjavona, na dia mbola miaraka amintsika aza ny mozikany. Ianao dia manana this entry izay ahitanao mpanakanto samihafa manao fanomezam-boninahitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » "Drawing David Bowie" avy amin'i Brush Scribbles
Emanuele Dascanio dia mpanao hosodoko mpaka sary izay hamela anao ho tohina tanteraka
'The Cave Allegory' nataon'i CTopkis sy i JLTopkis ho fomba iray hafa hahitana ny interface Instagram